» प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अख्तियारमा पर्यो यस्तो उजुरी ! अब के होला ? हेर्नुहोस प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अख्तियारमा पर्यो यस्तो उजुरी ! अब के होला ? हेर्नुहोस – हाम्रो खबर
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अख्तियारमा पर्यो यस्तो उजुरी ! अब के होला ? हेर्नुहोस
मुख्यमन्त्री राई आफैँ पनि सदाचारी आचरण पालना गर्नुपर्ने कम्युनिस्ट पार्टीका नेतासमेत भएकाले उनको भड्किलो बिहेले सांस्कृतिक आचरणमा प्रश्न थपिएको छ । सामाजिक सुधार ऐनअनुसार ५० जनाभन्दा बढी जन्ती लगेर भड्किलो खर्च गरेर बिहे गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। आजको खबर बाट
बिराटनगरमा, प्रचण्ड माथि जुत्ता हानेको भन्दै भाइरल भएको तस्वीरको,वास्तविकता यस्तो रहेछ ! हेर्नुहोस ।
प्रचण्डको एक तस्वीर अहिले सामाजिक सञ्जालमा भा,इरल छ । तस्वीरसँगै लेखिएको क्याप्सनका कारण उक्त तस्वीर,भाइरल भएको हो । उक्त तस्वीर प्रचण्डलाई जुत्ता हा’नेको भन्दै सेयर गरिएको छ ।तर तस्वीरको बास्तविकता अर्कै भएको खुलेको छ । शुक्रबार प्रचण्ड बिराटनगरमा थिए । त्यहाँ उनले निर्धारित कार्यक्रम,लाई सम्बोधन गरे ।
“सम्बोधनपछि स्टेजबाट ओर्लदै गर्दाको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राखेर ,जु,त्ता हा’नेको दाबी गरिएको छ, जुन बास्तविक, होइन ।प्रचण्डलाई जुत्ता हा’नेको होइन् । स्टेजबाट ओर्लनेक्रममा सुरक्षाकर्मीले उनलाई सहयोग गरेका थिए । स,हयोग, गर्दै गर्दाको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राखेर हल्ला फिजाइएको हो ।